Madaxweynihii hore ee Puntland Cade oo aas qaran loo sameyn doono - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynihii hore ee Puntland Cade oo aas qaran loo sameyn doono
Madaxweynihii hore ee Puntland Cade oo aas qaran loo sameyn doono
February 11, 2017 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
8-dii Janaayo, 2005-dii ilaa iyo 8-dii Janaayo, 2009-kii, waxa uu soo noqday madaxweynaha Puntland. [Xigashada Sawirka: Horseed Media]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynihii hore ee dowladda Puntland Maxamuud Muuse Xirsi sidoo kale loo yaqaan “Cade Muuse” kaasoo asbuucii lasoo dhaafay ku geeriyooday gudaha dalka Isutaga Imaaraatka Carabta, ayaa loo qaban doonaa aas qaran, sida masuuliyiin katirsan dowladda ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
Aaska qaran ayaa ka dhici doona magaalooyinka Boosaaso ama Qardho maalmaha soo aadan.
Sida ay ilo-wareedku sheegeen, munaasabada aaska qaran ayaa waxaa ka qeybgali doona Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali iyo Raysulwasaaraha wakhtigiisu dhammaanayo ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo sidoo kale si lamid ah qoyskii Cade iyo dad kale.
Warsidaha Puntland Mirror ayaa furay boga tacsida oo aad ugu tacsiyeynaysid shacabka Puntland, asxaabtii iyo qoyskii madaxweynihii hore. Halkan ka tag: Tacsida Cade.
July 15, 2017 Fiqi Bashiir Cabdulle Codweyn oo lagu aasay Gaalkacyo
February 14, 2017 Diyaarad sida meydka madaxweynihii hore Puntland oo timid garoonka diyaaradaha Boosaaso
January 1, 2017 Reer Guuraaga ay abaartu saamaysay oo wali u hayaansan deegaanada gobolka Karkaar oo dhawaan roobabku ka da’een
Madaxweynaha Puntland oo tagay magaalada Boosaaso